गीतकार आफैँमा कुसल श्रोता हुन आवश्यक छ : दर्पण राई | Screennepal
गीतकार आफैँमा कुसल श्रोता हुन आवश्यक छ : दर्पण राई
२०७५, ७ पुष शनिबार ११:५७screennepalhot news, Interview, Music0
काठमाडौं । गीतले पनि लगानी उठाउँछ र ? भन्नेहरुका लागि गतिलो जवाफ बनेको छ, ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’ गीतकार दर्पण राईको चर्चित उक्त गीतको सिक्ेवलसमेत आएको छ । एक साता यता लगातार यु–ट्युब ट्रण्डिङमा रहेको ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–२’ले बजारमा आउनुअघि नै लगानी उठाएको थियो । गीतकार दर्पणका अनुसार विभिन्न कम्पनीले स्पोन्सर गरेपछि रिलिज अघि नै लगानी उठेको हो । पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको उक्त गीतलाई गायक विक्रम राईले संगीत गरेका हुन् । दर्शक तथा श्रोताले अत्याधिक रुचाएको गीत ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’ सिरीजका गीतकार तथा मोडलसमेत रहेका दर्पण राईसँग गरिएको कुराकानी :
आफ्नो चर्चित गीत ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’को सिक्वेलबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो ?
– दर्शक तथा श्रोताबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ, आइरहेको छ । रिलिज गर्नुअघि केही डर लागेको थियो । अघिल्लो जस्तो दर्शकले नरुचाउने पो हो कि भनेर । तर, त्यो डरबाट अहिले मुक्त भएको छु । पहिलको भन्दा पनि ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–२’लाई बढी रुचाएइको छ ।
हरेक दिन गीत तथा भिडियोहरु रिलिज हुन्छन् । तर, तपाइँको ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’लाई नै किन रुचाइयो जस्तो लाग्छ ?
– मैले बुझेँअनुसार यो गीत मन पराउनको कारण सरल शब्द चयन नै हो किनकि, दर्शक तथा श्रोता सरल भाषाका लेखिएका र मन छुने गीत नै रुचाउँछन् । तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे पनि सरल तर भावनात्मक रुपमा लेखिएको गीत हो । अर्को कुरा स्वर र संगीतमा पनि मेल खाएको छ ।
गीतकारका रुपमा चर्चित हुँदाहुँदै मोडलिङ चाहिँ केका लागि गर्नुहुन्छ ?
– गीतकार तथा संगीकार भनेको पर्दा पछाडिका सेलिब्रेटी हुन् । मोडलिङ भनेको पर्दामा देखिने हो । गीतकारका रुपमा चिनिए पनि पर्दामा देखिने केही लोभले गर्दा मोडलिङ गरेको हुँ । तर, म जोसुकैको गीतमा मोडलिङ गर्दिनँ । मोडलिङ रहरमात्र भएकाले प्राय आफ्नै गीतमा र अरुको छानेर मात्र गर्छु ।
गीत लेखनसँगै तपाइँ म्युजिक भिडियो निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ । आफूलाई गीतकार, निर्देशक वा मोडल के भन्नुहन्छ ?
– यी तीनै विधाका नङ–मासुको सम्बन्ध छ । त्यसैले गीत लेख्ने निर्देशन गर्नु र म्युजिक भिडियो बनाउनेले मोडलिङ गर्नु पनि सक्छ । त्यस्तै म पनि गर्छू । तर, वास्तवमा म गीतकार नै हुँ ।
दर्पणको गीतको भिडियोमा उनकै क्रिशयन हुन्छ तर निर्देशकको नाम अरुको राख्छ भन्छन् नि ?
– एउटा क्रियटर भएपछि भिडियो बनाउँदा पनि आफ्नो कन्सेप्ट लगाउने गर्छु । भिडियो निर्माण एक टिमवर्क पनि हो । हरेक भिडियो बनाउँदा पनि आफ्नो कन्सेप्ट प्रयोग गर्नुको कारण पनि यही हो । मलाई चित्त नबुझेसम्म त्यो भिडियो फ्लोरमा जाँदैन ।
तपाइँलाई गीत लेख्दै गर्दा यो गीत चल्छ भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न ?
– त्यो त थाहा हुन्छ । तर लेख्न सुरु गर्दा दर्शक तथा श्रोताको भावनामा छिरेर लेख्छु । श्रोताले कस्तो गीत रचाउँछन् भन्ने कुरा श्रोता भएर मनन गर्छु अनि लेख्न सुरु गर्छु ।
त्यसो भए तपाइँ एक कुसल श्रोता पनि हुनुहुन्छ, होइन त ?
– अवश्य पनि । म हरेक किसिमका गीत सुन्छु । नेपाली मात्र नभएर हिन्दी, अंग्रेजी र अन्य भाषाका गीत पनि सुन्ने गर्छु ।
‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–२’ गीत छोटो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
– पहिलोभन्दा छोटो छ । पहिलो तीन अन्तरा थियो । यो दोस्रो एक स्थाई र एक अन्तरा मात्र छ । यसको मतलव ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–३’ आउँछ भन्ने संकेत हो । एउटा स्टोरी क्रियट गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–३’ पनि ल्याउँदै छु ।
मान्छेहरु ‘गीतमा लगानी बालुवामा पानी’ भन्छन् । तर, गीत लेखेर पनि कमाउँन सकिँदोरहेछ नि है ?
– खै सकिँदोरहेछ । मैले गीत लेखेरै कमाएको छु । गीत रांम्रो दर्शक श्रोताले रुचाउँने हुनुपर्छ । अबश्य कमाउन सकिन्छ ।
‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’ गीतबाट कस्तो कमाइ भयो ?
– राम्रै भयो । ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–२’ले त गीत रिलिज हुन अगावै लगानी उठाएको थियो । यु–ट्युबमा पनि राम्रै गइरहेको छ ।
अघिल्लो जस्तै ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे–२’ चाइल्ड भर्सनमा आउँछ कि आउँदैन ?
– त्यस विषयमा अहिले सोचेको छैन । अहिले यही गीतको प्रमोशन कार्य भइरहेको छ ।
‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’ फिल्ममा पनि आउने कुरा थियो नि ?
– अवश्य आउँछ । काम गर्दै जाँदा केही ढिलो हुन सक्छ । तर जसरी पनि ‘तिम्ले बाटो फेरेऊ अरे’ फिल्म बन्छ । यसबारे पहिले नै घोषणा गरिसकिएको छ ।
तत्कालको प्रोजेक्ट के छ ?
– अब गायिका तथा मोडल सम्झना राईले गाउनु भएको ‘नजिकिनु’ गीतको भिडियो ल्याउँदैछु । यो गीत पनि राम्रो बनेको छ । पक्कै पनि दर्शक तथा श्रोताले रुचाउँनेछन् भन्ने लागेको छ ।
Previous Post२२ लाखको तिरिमिरी... (यस्तो बन्यो भिडियो) Next Postमिलन–कमलको ‘मन रेशम’ आउँदै (प्रोमो यस्तो छ)